Mareykanka oo u riyaaqsan howlgalka Amisom ee ka dhanka ah Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo u riyaaqsan howlgalka Amisom ee ka dhanka ah Alshabaab
13th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Washington – Mareeg.com: Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay u riyaaqsan tahay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee laga wado Soomaaliya, kaasoo ay horkacayaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay in howlgallada koonfurta Soomaaliya ay ka fulinayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ay soo dedejinayaan xasillooni horseedda soo celinta adeegyada hay’adaha dowladda, waa sida warka loo dhigaye.
“Howlgallada socda waa kuwo qayb ka qaadanaya in ammaanka iyo deggenaashaha Soomaaliya dib loosoo celiyo, isla markaana suurogelinaya inay dib u soo laabtaan shaqooyinkii hay’adihii dowladda,” ayaa lagu yiri warka Mareykanka kazoo baxay.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu Mareykanku sii wadayo taageerada dhinacyada qalabka iyo tababarrada ah ee uu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM.
“Dowladda Mareykanku waxey ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ka taageeri jiray sidii ay dhabar-jabin lahaayeen Al-shabaab, dalka oo dhanna ay nabad ugu soo dabbaali lahaayeen, taageeradaas waan sii wadaynaa, waxaaa ciidamadan ugu deeqaynaa qalab ciidan, tababarrana waan siinaynaa,” ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka.
Mareykanka ayaa taageero xoog leh siiya ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, wuxuuna ugu deeqaa dhaqaale, qalab ciidan iyo farsmooyinka dagaallada.
Dowladda Maraykanka ayaa tan iyo sanadkii 2007 ugu yaboohday AMISOM aduun dhan $512 malyuun oo dollar iyadoo in kabadan $171 malyuun ku bixisay sidii loo dhisi lahaa ciidamada dowladda Soomaaliya.
AMISOM oo ka xumaatay hadal kasoo yeeray askari ka tirsanaa ciidamada Burundi
Milateriga Soomaaliya iyo Amisom oo ku wajahan Degmada Buulo-burte ee Gobolka Hiiraan